Ngwa: Mmemme egwuregwu, mmemme nkwado, mmemme, klọb, nnukwu ụlọ ahịa, ọgbakọ, ihe ngosi okporo ụzọ na ihe ngosi azụmaahịa
Akụrụngwa nke ọkọlọtọ magnum na-agụnye ogwe osisi, otu ihe nkwado metal Y shape na akpa, mkpokọta ịdị arọ ihe dịka 1kg naanị. Ọkọlọtọ magnum nwere nnukwu ibu, ị nwere ike ibuba ọkọlọtọ eserese / base/Y-bracket n'ime akpa ebu wee bufee gaa ebe dị iche iche n'ụzọ dị mfe.
Ọ dịghị ngwá ọrụ dị mkpa iji kpokọta, dị mfe ma dị mma iji rụọ ọrụ maka ndị ahịa njedebe.
Ebe dị iche iche dị na ntọala dị iche iche nke dabara na ngwa dị iche iche, na ebe a na-ebu ibu anyị, ọkọlọtọ nwere ike iji nwayọọ nwayọọ na-agbagharị na ikuku, mepụta echiche 360 ​​° na ifufe, nke na-adọta uche ma gosipụta ozi gị nye ndị na-agafe agafe. A na-eme mkpanaka ọkọlọtọ site na eriri carbon composite fiber nke nwere ike ikwe gị nkwa ogologo oge iji oge ọbụlagodi ọnọdụ ikuku
Edemede eserese omenala nke nwere ike ịbụ otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ na-agbanwe agbanwe
(1) Ọ dị mfe ịtọlite ​​​​ma budata
(2) Ụdị ọkọlọtọ pụrụ iche na nke mara mma na-eme ka ọ na-enye ume ọhụrụ
(3) Nke ọ bụla set na-abịa na-ebu akpa. Enwere ike ibugharị ma dị fechaa
(4) Ọtụtụ ntọala ma ọ bụ ihe mgbakwunye dị ka dabara ngwa dị iche iche
Koodu ihe Ngosipụta elu Ogo mbipụta Nkwakọ ngwaahịa
Nke gara aga: Ebe maka ahịhịa ma ọ bụ ájá
Osote: Ọkọlọtọ ọkọlọtọ / ọkọlọtọ